Saturday June 18, 2016 - 11:46:06 in Articles by Super Admin
Inkastoo wejigii hore ee codeeynta uu Radio Shabelle hogaaminaaye badnaanta codadka hadana intaan la gaarin halsaac waxaa durba xoogeeystay codadka ay bixinayaan taageerayaasha Radio Kulmiye.
Radio Kulmiye KNN ayaa hantay codad 874 cod halka Radio Shabelle helay codad dhan 800 .
Radio Goobjoog FM ayaa kaalinta seddexaad ciriirsaday isagoo helay cod dhan 271 .
Idaacadaha Mustaqbal iyo Radio Muqdisho ayaa safka dambe galay iyagoo helay 11 cod iyo 19 cod.
Dadka codeeynta ku laablaabtay ee laba jeer iyo ka badan codeeyay lama qaadan codeeyntooda wax ka badan hal cod oo kaliya.
Radio Dalsan iyo Radio Danan oo Muqdisho ka hoowlgala qof ka mida Codeeyaasha magacooda sooma qaadin oo tartanka hal cod kama helin.
Maamulka Radio Shabelle ayaa codsaday in wareegyadda 2-aad iyo kan 3-aad la qabto maalin cadeey xilli shacabka Muqdisho soo jeedaan.
Wareega labaad waxaa codeeyn kala baxa loo qaban doonaa Shabelle,Kulmiye iyo Goobjoog FM ,iyadoo wareega seddexaadna ay u gudbi doonaan labada Idaacadood ee hela codadka ugu badan.
Sikastaba ha ahaatee, Radio Kulmiye ayaa loogu hambalyeeyay guusha uu ka soo hooyay tartanka wejiga koowaad,waxaana taageerayaasha KNN laga sugayaa iney is adkeeyaan wareega labaad oo loo codeeyn doono maalinta Axadda [berrito} saacadu markeey tahay afarta galabnimo xilliga Muqdisho.
[Daawo] gabadhii ugu ololaha badneed Xisbiga Wadani oo dhabarka xejisay Xisbigaas iyadoo dheeman ku tilmaamtay Xisbiga Kulmiye
Daawo siyaasadii ugu ololaha badneed Xisbiga Wadani oo dhabarka xejisay Xisbigaas iyadoo dheeman ku tilmaamtay Xisbiga Kulmiye Full Article
[Daawo] Saxaafiyad caana oo ku biirtay RTN TV iyo Tv-ga oo laga yaabo inuu noqdo horyaalka TV-yadda
Daawo Wariyeyaasha Tv-yadda u guuray RTN TV iyo Saxaafiyad caana oo ku biirtay Full Article
[Dhageyso] Fadeexo Taliyahii hore ee Nabadsugidda Tuuryare oo gurigii Radio Shabelle xoog ku degay iyo Sheekh Cariif oo xukun diiniya ku riday
Dhageyso Fadeexo Taliyahii hore ee Nabadsugidda Tuuryare oo gurigii Radio Shabelle xoog ku degay iyo Sheekh Cariif oo xukun diiniya ku riday Full Article
[Dhageyso] Wariyaha Radio Kulmiye ee Galkacyo oo xaqiijiyay in la dilay Madaxii Zaadka Ciidanka Puntland
Dhageyso Wariyaha Radio Kulmiye ee Galkacyo oo xaqiijiyay in la dilay Madaxii Zaadka Ciidanka Puntland Full Article
[Dhageyso] Warbixin xasaasiya oo Radio Shabelle baahiyay iyo shacabka Muqdisho oo si wadajira u codeeyay
Dhageyso Warbixin xasaasiya oo Radio Shabelle baahiyay iyo shacabka Muqdisho oo si wadajira u codeeyay Full Article
[Dhageyso] Salaad Cali Jeelle oo akhriyay Warka Radio Kulmiye laakiin muxuu Garguurte ku sifeeyay ?
Dhageyso Salaad Cali Jeelle oo akhriyay Warka Radio Kulmiye laakiin muxuu Garguurte ku sifeeyay ? Full Article
[Daawo] Oradyahankii guusha hantay oo Xukumaddii Ethiopia god dheer ku riday kadib markii RIO ka dhigay banaanbax
Daawo Oradyahankii guusha hantay oo Xukumaddii Ethiopia god dheer ku riday kadib markii RIO ka dhigay banaanbax Full Article